ဘာသာ ၁ - ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း
1-1. အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည် လူ့ဇာတိကို ခံယူနည်း
1-2. ယေရှုသည် အဘယ်သူနည်း
1-3. ဘုရာရားသခင် စီမံထားသော ပညတ်ချက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်
1-4. ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ပါသလား
1-5. ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အပြစ်သားများ ဖြစ်နေပါသေးသလား
1-6. အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောနိုင်ပါသလား
1-7. ရော ဂး၃၀ “ထိုသို့ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့်သောသူတို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ခေါ်တော်မူသောသူတို့ ကိုလည်း ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့ တည်စေတော်မူသော သူတို့ကိုလည်း ချီးမြောက်တော်မူ၏” ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အဆင့်ဆင့်သန့်ရှင်းစေတော်မူခြင်း၏ ခံယူချက်ကို အထောက်အကူပြုပါသလား။
1-8. အပြစ်ကို ဝန်ခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ပျောက်ကွယ်စေနိုင်မည်လား
1-9. စစ်မှန်ကောင်း သတင်းကောင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
1-10. ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် မိမိကိုယ်မိမိ ယဇ်ကောင်အဖြစ် အဘယ်ကြောင့် ပူဇော်ခဲ့သနည်း
1-11. ယေရှုရစ်ကို နှစ်ခြင်းပေးခဲ့သူ ယောဟန်သည် အဘယ်သူနည်း
1-12. ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် နေ့စဉ်ကျူးလွန်သောအပြစ်များအတွက် မည်ကဲ့သို့ အပြစ်ဖြေခြင်းယဇ် ပူဇော်ခဲ့သနည်း
1-13. ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် တစ်နှစ်တာလုံး ကျူးလွန်သောအပြစ်များအတွက် မည်ကဲ့သို့ အပြစ်ဖြေ ခြင်းယဇ်ပူဇော်ခဲ့သနည်း
1-14. ထာဝရအပြစ်ဖြေလွှတ်ရန်အတွက် မည်သည့်ယဇ်ကို ပူဇော်သနည်း
1-15. ရွေးနှုတ်ခြင်းကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် အပြည့်အစုံပေးပါသလား (သို့) တစ်စပြီးတစ်စပေးပါသလား
1-16. အပြစ်၏အဖိုးအခသည် အဘယ်နည်း
1-17. ယေရှုခရစ်သည် အဘယ်ကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ရသနည်း
1-18. ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် ဘယ်အရာကို ရရှိခံစားမည်နည်း
1-19. ယေရှုခရစ်ကို အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်ရမည်နည်း
1-20. ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်သည် အဘယ်နည်း
1-21. သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ အယူအဆလွဲမှားသူသည် အဘယ်သူနည်း
1-22. ဆရာ၏မေတ္တာစေတနာဖြင့် ပို့ပေးသောခရစ်ယာန်စာအုပ်များကို ဖတ်ခဲ့ရာတွင်ယေရှုဗတ္တိဇံအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာ၏ခံယူချက်များ ကို စိတ်ဝင်စားမိပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဆရာသင်ပေးသော ကျွန်တော် တို့၏ဗတ္တိဇံနှင့်ယေရှုဗတ္တိဇံ၊ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့၏ ဆက်စပ်မှုအကြောင်းကို ရှင်းပြနိုင်မည်လော။
1-23. နေ့စဉ်အပြစ်ကျူးလွန်နေသော ကျွန်တော်သည် ဖြောင့်မတ်ပါသ ည်ဟု မည်သူပြောနိုင်သနည်း။
1-24. ယောဟန်၏နောင်တနှင့်ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံဆိုသည်မှာ အဘယ် နည်း။
1-25. ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သည့်အရာ ဖြစ် သည်ဟုနားလည်ခြင်းသည်ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကိုသတင်းကောင်း တွင် ပယ်ဖျက်ရာရောက်သည်ဟု သင် ထင်မိပါသလား။
1-26. ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြနိုင်မည် လော။
1-27. တမန်တော်များက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအပေါ် အလေးအနက်ထားရှိ ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာတွင် မည်သည့်အထောက်အထားများ တွေ့ရပါသ နည်း။
1-28. ထိုသို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့် အလေးအနက်ထား ပြောပြခြင်းမရှိ ခဲ့လျှင် ဤအတိုင်းသာယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို လစ်လျူရှုနေလိမ့်မည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် မည်သို့ ကွဲလွဲပါသနည်း။
1-29. ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း သေသေချာချာ ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးတွင် ခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းနှင့် အတူ ငြိမ်သက်ခြင်းလည်းရရှိပါသည်။ သို့သော် မိတ်ဆွေ၏တရားဒေသနာ ကြောင့် ခေါင်းရှုတ်ရပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် သူ၏ကားတိုင်တော် နှင့်အတူ ဗတ္တိဇံကိုပါ ယုံကြည်ရမည်လား။
1-30. အကယ်၍ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်း သင်၏ သဘော ပေါက်ခြင်းသည်အမှန်ဖြစ်လျှင်ကားတိုင်ပေါ်မှလူဆိုးတို့အတွက် ကယ်တင် ခြင်းရနိုင်ဘွယ်မရှိပါ။ အကယ်၍ ကားတိုင်ပေါ်က လူဆိုးတို့ကို စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၏ချွင်းချက်တခုအနေဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဆိုလျှင် ဘုရား သခင်သည် နိုင်ငံဝင်စားဖို့ရန်သတ်မှတ်ထားသောသူ၏ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းကို သူကိုယ်တိုင် ဖောကဖျက်သောကြောင့် တရားမျှတမှုမရှိပါ။ ကား တိုင်ပေါ်က လူဆိုးများ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို မည်သို့ ဖြေရှင်းပေးမည် နည်း။
1-31. ဘုရားသခင်သည် မြင့်မြတ်သောဘုရား၊ မေတ္တာဂရုဏာဘုရား၊ ကြိီးမြတ်သောဘုရားဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွင် အပြစ်ရှိသော် ငြားလည်း ယေရှုကို အမှန်တကယ် ယုံကြည် ခဲ့လျှင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ် ယူဆနိုင်မည်လော။
1-32. စာရေးသူ၏ အခိုင်အမာ ဖော်ပြချက်အရအကယ်၍ ယေရှုသည် အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်၊အနာဂတ်များတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့၏အပြစ် အလုံးစုံကို ဖယ်ရှားပေးပြီဆိုလျှင် လူတယောက်သည် သူ၏အပြစ်များကို ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်တော်အားဖြင့်အမှန်တကယ် အပြစ်မှလွတ်ပြီ ဆိုသည် အတွေးအခေါ်ကြောင့် အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်ကျူးလွန်မည့် အပြစ် များကို မည်သို့ ဖယ်နိုင်မည်နည်း။ ထိုသူသည် လူတစ်ယောက်ကို သတ်မိသည့်တိုင်ယေရှုကား တိုင်တော်အားဖြင့် သူကျူးလွန်ခဲ့သောအ ပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ခဲ့ပြီဟူ၍သာ မှတ်ယူတော့မည်။ ထို့ကြောင့် တုန့်ဆိုင်း မှုမရှိဘဲ အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်၍ အပြစ်ကျူးလွန်ရမည့် အလားအလာ သာရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပေးပါ။